Ukuthola I-Plumber Namathiphu Okufaka Amapayipi Okunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Ukuthola I-Plumber Namathiphu We-Plumbing Ukunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi
2021 / 09 / 25 UkwahlukanisaBlog 3392 0
Umsebenzi wamapayipi wokugaya amanzi yingxenye ebaluleke kakhulu cishe kunoma yiliphi ikhaya, futhi izinto ezinjengalezi kufanele zifakwe futhi zigcinwe kahle ukuqinisekisa ukuthi uvikela noma yiziphi izinkinga ezizayo. Lolu hlobo lomsebenzi kufanele luhlale lwenziwa ngusonkontileka onelayisense. Lokhu empeleni kudingwa yizifunda nezindawo eziningi ezahlukahlukene, njengoba noma yimuphi umsebenzi ongena-mvume ungaphephile futhi mhlawumbe ungekho emthethweni.
Umuntu osebenza uplamba ngamanzi unesibopho sokwenza le misebenzi elandelayo.
- Ukuthola nokulungisa ukuvuza kuzinhlelo zegesi namanzi
- Faka esikhundleni izinhlelo ezindala zamapayipi
- Ukufaka nokulungisa imigqa yamanzi
- Lungisa amapayipi amanzi aqhumile
- Ukufaka amadivayisi we-anti-scald nezihlungi zamanzi
Izinhlobo zezinto zokufaka amapayipi
Kukonke, kunezinhlobo eziyishumi ezihlukene zamapayipi ongadinga ukuzisebenzisa, kepha kuya ngenkinga ethile okungenzeka ukuthi ubhekene nayo.
Amapayipi amasha. Lokhu kungabandakanya ukulungisa idreyini evinjiwe noma ukufaka okusha sha.
U-plumber ophuthumayo. Isetshenziselwa izimo eziphuthumayo kakhulu futhi itholakala nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sebusuku.
Ugesi wePlamba. Zisiza ukuqinisekisa ukuthi ikhaya lakho noma ibhizinisi lakho liphephe ngokuphelele futhi alinabungozi ekusetshenzisweni kwegesi ngokufaka amamitha wegesi, izishisi, ama-valve nezilawuli.
Ukulungiswa kwendlu yangasese. Lokhu ikakhulukazi kubandakanya ukufaka, ukugcina nokulungisa amapayipi ahambisana nokususa indle ekhaya lakho.
Imisinga. Qinisekisa ukuthi amanzi avela ezimvuleni ezinkulu angakwazi ukuphuma ophahleni ngesikhathi sezulu esibi.
Amapayipi aluhlaza okotshani. Lokhu kusiza ukonga amanzi ezingxenyeni ezahlukahlukene zekhaya lakho, kanye nokunciphisa uhlobo lokuphakelwa kwamanzi emphakathini. Ngenxa yalokhu, uzophinda ugcine imali ngokuhamba kwesikhathi.
Amapayipi wokwenza ngcono ikhaya. Lokhu kuyasiza uma uhlela ukwakha noma ukuvuselela ikhaya lakho, njengoba uzokwazi ukonga imali nokuphazamiseka ngokufaka zonke izinhlelo ezifanele zamapayipi. 8.
Ukugcinwa kwamapayipi. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo zamapayipi ekhaya lakho zisebenza kahle ngokuphelele.
Amapayipi. Lokhu kusho ukufakwa, ukunakekelwa nokulungiswa kwezinto ezifakiwe namapayipi ahambisa amanzi abandayo namanzi ashisayo angena ekhaya lakho.
I-Mechanical Service Plumbing. Inikeza usizo ngokufakwa, ukulungiswa kanye nokugcinwa kokufakwa kanye namapayipi wokushisa kanye nokupholisa amasistimu ezindaweni zokuhlala nezentengiselwano.
Uzithole usudinga izinsiza zamapayipi? Qiniseka ukuthi uqasha izinsizakalo zamapayipi ngokuya ngomsebenzi owuqashelayo, isibonelo, ukufaka esikhundleni sepayipi elingalungile kulula kumuntu osebenza ngamapayipi, kodwa ukufaka lonke uhlelo lwamapayipi lwamanzi kungadinga izinga eliphakeme lokuqeqeshwa, isipiliyoni kanye nekhono.
Inganekwane yomsebenzi wamapayipi awunakuvunyelwana ngawo kwasekuqaleni
Ungahle ungabuboni ubuqiniso bamapayipi uma kuqhathaniswa nensizakalo ejwayelekile yamapayipi yaseToronto. Iqiniso ukuthi ubukhona bezinganekwane zamapayipi okwenza kube nzima kubaninikhaya ukwenza izinqumo ezilungile zamapayipi ngesikhathi esifanele nangesiqondiso esifanele. Akudingeki ukuthi, izinganekwane zamapayipi zidala ukudideka okukhulu ngokuhamba kwesikhathi, bese kuthi, izinsiza zamapayipi eToronto azilula ephaketheni lomninikhaya. Okulandelayo uhla olungamanga lwezindawo zamapayipi ezingavunyelwanwa nazo kwasekuqaleni ukugwema izinsizakalo zamapayipi ezibiza kakhulu
Oompompi abavuzayo bajwayelekile
Uyasikhumbula isikhathi sokuqala lapho umpompi wakho waqala ukuvuza? Kufanele ngabe ucabange ukuyiqinisa noma ukuyibuka imizuzu embalwa. Kamuva, usujwayele umkhuba wokuvuza kompompi. Eqinisweni, sekuyinto ejwayelekile kuwe ukubona ompompi ovuzayo. Inkinga enkulu iza lapho umthethosivivinywa wamanzi uqala ukukhuphuka ngenxa yokuthi amanzi alokhu egeleza ephuma kumbhobho ovuzayo. Manje, uyabona ukuthi lesi simangalo siqanjiwe kanjani emapayipini? Ngokuzayo lapho ubona umbhobho ovuzayo, shayela ochwepheshe endaweni yakini iPlumbing Toronto.
Iziqhumane zokufudumeza amanzi
Namuhla, ama-heater amanzi abe yisidingo kuwo wonke amakhaya, ngaphandle kwenkathi. Enye yezinkampani ezihola amapayipi aseToronto TPG ochwepheshe ithi, “Amakhasimende amaningi athanda ukungabaza ukuphepha kwama-heater ngoba axwayisiwe esimweni sokuqhuma kwama-heater.” Ama-heater amanzi awaqhumi. Yebo, ithangi lesifudumezi samanzi lingaqhekeka ngenxa yokuntuleka kwesondlo. Kodwa-ke, ayikho into efana nokuqhuma encwadini yezingozi yama-heater wamanzi anamuhla. Ukufaka kwanamuhla kwe-heater yamanzi kuza newaranti nesiqinisekiso. Ngaphandle kwalokho, kunconywa ukuthola izinsizakalo zokufaka kusuka kwisifaki esinolwazi.
Amapayipi ashaywayo angcono kunamapayipi angenakucinywa
Amapayipi angafuthwayo awekho kalula futhi angadala izinkinga zokuvaleka ngokuhamba kwesikhathi. Ngakolunye uhlangothi, amapayipi angashisi ahla ngokushesha futhi abangele ukungcola okuncane ekuhambeni kwesikhathi. Kunconywa ukuthi kuqinisekiswe ukuthi izinga lamapayipi lihle kakhulu ngaphambi kokufaka amapayipi angashisi. Ngaphandle kwalokhu, zonke izinhlobo zamapayipi zidinga ukunakekelwa okujwayelekile, ukuhlanzwa ngobungcweti, nokushintshwa ekugcineni kwempilo yazo, futhi okufanayo kuya emapayipini angavuleki. Ngakho-ke, ungakhethi amapayipi ashaywayo ngaphezu kwamapayipi angashisi.
Izeluleko Zamapayipi Okunciphisa Ukusetshenziswa Kwamanzi Nokonga Imali
Uma ikhaya lakho libonakala lisebenzisa amanzi amaningi kunokujwayelekile, maningi amathuba okuthi ube nokuvuza kwenye indawo. Lokhu kungadalwa nayipayipi elingalungile noma izinto zikagesi nezinto zalapho ezingasebenzisi ugesi ngendlela efanele. Ukuba nompayipi okhokhelwayo owenza ukuhlolwa okuthile ekhaya lakho kuzokusiza uqonde ukuthi uchitha amanzi angakanani.
Uchwepheshe weplamba angakusiza wehlise ukusebenzisa kwakho amanzi ngokukhomba izindawo lapho ungonga khona amanzi.
Oompompi abahamba kancane
Oompompi abahamba kancane bandisa ingcindezi yokuphuma kwamanzi ngaphandle kokwandisa inani lamanzi asetshenzisiwe. Uma ungafuni ukufaka esikhundleni sepompo esivele ifakiwe, u-plumber wakho angangeza izihlungi ezincane kumbhobho wakho osuvele ukhona.
Izindlu zangasese ezigeleza kancane
Umqondo wokugeleza okuphansi wokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ngepompo uzosiza nasekunciphiseni inani lamanzi elisetshenziswa yindlu yangasese lapho ugeja. Ngokuya ngohlobo lwendlu yangasese oyithengayo, ungonga cishe amalitha amathathu amanzi noma ngaphezulu nge-flush ngayinye.
Bheka ukuvuza kwangaphakathi nangaphandle
Bheka wonke amapayipi akho ukuthi avuza yini ngaphakathi nangaphandle. Ungakhohlwa ukuhlola amapayipi omshini wakho wokuwasha. Ukudonsa okuncane okuvela empompini noma kwepayipi kungabonakala kungabalulekile, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ungalahlekelwa amakhulukhulu wamalitha amanzi.
Hlola ompompi / amapayipi angaphandle
Ngenkathi ubheka wonke amapayipi akho asendlini nompompi, qiniseka ukuthi uyaphuma uyobheka ompompi namapayipi ngaphandle kwendlu yakho. Hlola ichibi lakho, ubhavu oshisayo, ithangi lamanzi futhi.
Phinda usebenzise i-graywater yakho
Ngenkathi ungeke ukwazi ukusebenzisa amanzi ampunga ukupheka noma ukugeza, ungawasebenzisela ukunisela utshani bakho noma ukugeza imoto yakho. IGreywater amanzi owashiya ngemuva kokugeza izitsha, izingubo noma ukugeza. Uma ufuna ukusebenzisa i-greywater yakho kahle, shayela umuntu osebenza ngamaplamba ukufaka uhlelo lwamapayipi amabili oluqoqa amanzi ampunga njengoba ekhiqizwa.
Lapho ukusetshenziswa kwakho kwamanzi kuphakeme kunalokho obekufanele kube khona futhi awazi ukuthi ubheke kuphi noma yini, biza umuntu osebenza ngamapayipi asebenza ngobungcweti. Zingakusiza ekutholeni ukuvuza futhi zingakunikeza nezeluleko zokuthi unganciphisa kanjani inani lamanzi umndeni wakho owasebenzisayo usuku ngalunye. Ukuhlola okumbalwa okusheshayo okuzungeze ikhaya lakho kungakunika izimpendulo ozidingayo futhi kukusize wonge isikhathi nemali.
Izizathu Eziphezulu Zokuthintana Nosonkontileka Wamapayipi Onelayisense
Noma ngabe ufuna ukusula idreyini evinjiwe noma ufake izinto ezintsha zokufaka amapayipi ekhaya lakho, kufanele uthole umuntu osebenza ngamapayipi osebenza kahle eNorthbrook ongakunika izinsizakalo ezisezingeni eliphezulu zamapayipi. Umsebenzi wokufaka uplamba amanzi awulula ngoba ubandakanya ukulungisa nokufaka ompompi abahlukahlukene, amaketela, amapayipi nama-valve ongeke ukwazi ukuzenzela wedwa. Ukuqasha usonkontileka wamapayipi kuzokunikeza ngezinsizakalo ezisheshayo futhi ezinokwethenjelwa futhi kuwukutshalwa kwemali okubalulekile kuwe ngezizathu eziningi.
Nazi ezinye zezizathu zokuqasha u-plumber
Isevisi enhle kakhulu.
Usonkontileka osebenza ngamapayipi oqeqeshiwe uzokunikeza insizakalo ehlukile ngaphandle kokubuza. Noma ngabe kususwa amapayipi avinjelwe, kulungiswa ompompi namaphayiphu, noma ukufaka izifudumezi zamanzi nezinye izinto zokufaka amapayipi, umuntu osebenza ngamapayipi amanzi uzoqinisekisa ukuthi uthola insiza engcono kakhulu ngezinto zekhwalithi. Amapayipi ochwepheshe angaxazulula izinkinga zamapayipi ngokushesha.
Ngolwazi olunzulu namakhono, uplamba ochwepheshe uzokusiza ngokunembile futhi njalo ahlinzekele ngezinsizakalo zamapayipi ngamathuluzi afanele. Umuntu osebenza uplamba ngamanzi angaveza kalula imbangela yemisele evinjiwe kanye nompompi nezinye izinto ezingasebenzi kahle futhi athathe izinyathelo ezifanele zokubhekana nale nkinga. Awudingi ukuyalela umuntu osebenza ngamapayipi asebenza eNorthbrook ngokulungiswa kwamapayipi ngoba uzozixazululela lezi zinkinga ngokunemba nangamaphesenti ayi-100.
Ukuqasha umuntu osebenza ngamapayipi ngocwazi kuzokusiza ukuthi uthole izeluleko eziwusizo ngokulungisa nokugcina izindawo zakho zamapayipi ngoba umuntu osebenza ngamapayipi uyakwazi ukuvimbela amapayipi avinjelwe nokuthi angagcina kanjani ompompi, izihlambi kanye nompompi kusebenza kahle. Upayipi ngeke nje akusize ngokulungiswa kwamapayipi, kodwa futhi uzokusiza ngokulungiswa kahle kwemishini yakho ukuze welule isikhathi sokuphila kwayo.
Ngosizo losonkontileka osebenza ngamapayipi, ungonga imali ngoba oweplamba uzokweluleka ngokufaka izinto zokufaka amapayipi zakamuva nezingxenye ukwandisa impilo nokusebenza kwemipompi yakho nezinye izinto. Umuntu osebenza ngamapayipi angakweluleka ukuthi ushintshe imishini yamapayipi ezindala ekhuphula izindleko zakho zokwenza izinto, ngokwesibonelo, umuntu osebenza ngamapayipi angakucebisa ukuthi ushintshe isifudumezi sakho samanzi ufake esisha sokufudumeza amanzi kangcono nokusetshenziswa kukagesi okuncane ngesikhathi sokushisa okusheshayo.
Usonkontileka okhokhelwayo wamapayipi uzohlala ekuhlinzeka ngokulungiswa kwamapayipi asezingeni nokufakwa kwemikhiqizo emisha yamapayipi, ikunikeze ukwaneliseka okungamaphesenti ayi-100 nokuthula kwengqondo nokubuyisa inani eligcwele lotshalile imali yakho. Ngezinsizakalo ezithembekile zosonkontileka okhokhelwayo ngamapayipi, ungaqiniseka ukuthi izinkinga zamapayipi zizoxazululwa kahle futhi zithole isiqinisekiso sokulungiswa kwamahhala kwemishini yakho yamapayipi. Umpayipi onelayisense uzoxhumana nawe ngokunikeza izinsizakalo ezisezingeni.
Edlule :: Amathiphu Wokugcina Oompompi Bakho Bokugeza Bengenabala futhi Bungavuza Olandelayo: Dala Uhlelo Lokuhlobisa Lokugeza Kwamakamelo Ngamapayipi Okugeza
2021 / 09 / 28 3287
2021 / 09 / 27 3225
2021 / 09 / 25 5306
2021 / 09 / 24 3403
2021 / 09 / 24 3294
2021 / 09 / 24 1898